Iincwadi eziza kusebenza kwiimvakalelo kunye nabantwana | Uncwadi lwangoku
Elinye lamaphupha abo bonke abathanda ukufunda kukufaka ebantwaneni babo, abatshana, abafundi kunye nabantwana kubantwana babo, ngokubanzi, uthando lweencwadi kunye nokufunda. Ngenxa yoku kwaye ukongeza ekwenzeni loo mkhwa wokufunda kubo baphucula iimvakalelo zabo kwaye bazi nokutolika nokuzilawula, sinika uthotho lweencwadi ezilungele le njongo.
Ezi ncwadi zisebenza kwiimvakalelo kunye nabantwana abayi kudala kuphela izinto zokuzonwabisa kuzo kodwa baya kufumana impilo-ntle enkulu yeemvakalelo.
1 Amakhwenkwe namantombazana aneminyaka emi-3 ubudala
1.1 Iimvakalelo! Coco kunye noTula
1.2 "Ilifu" nguGlòria Falcón
2 Ukususela kwiminyaka emi-4
2.1 Isilo esibuhlungu, isigebenga esonwabileyo. Incwadi malunga neemvakalelo »
2.2 «I-labyrinth yomphefumlo» ngu-Anna Llenas
3 Ukususela kwiminyaka emi-5
3.1 «Umzi mveliso omkhulu wamagama» ngu-Agnes de Lestrade
3.2 "Isiqithi soTatomkhulu" nguBenji Davies
4 Ukususela kwiminyaka emi-6
4.1 "Ukudana" nguClaude Boujon
4.2 "Tristania Imperial" nguJaume Copons
5 Ukususela kwiminyaka esi-7 neli-8
5.1 «Ukupheka kwemvula kunye neswekile» nguEva Manzano Plaza
5.2 "Idayari yeemvakalelo" nguAnna Llenas
Amakhwenkwe namantombazana aneminyaka emi-3 ubudala
Iimvakalelo! Coco kunye noTula
Ngamanye amaxesha siziva sibhetele kunabanye, kwaye amaxesha amaninzi asazi ukuba singayithetha njani. Ukuba ngamanye amaxesha usixelela abantu abadala, cinga abantwana. Ngale ncwadi, abantwana baya kufunda ukunxibelelana, baqonde kwaye balinganise iimvakalelo zabo. Kubandakanya isiphawuli esinokususwa kunye umlinganiso weemitha apho baya kuba nakho ukuzoba kwaye babonakalise imeko yabo yengqondo ngawo onke amaxesha.
Kuyacetyiswa ngakumbi kubantwana abaneminyaka emi-3 no-4.
Luqweqwe oluqinileyo kwaye lunamaphepha angama-24 ewonke.
"Ilifu" nguGlòria Falcón
I-Nube yimbeko kubahlobo abacingayo okanye abangabonakaliyo abahamba nathi ngexesha lobuntwana kwaye, ngamanye amaxesha, kubo bonke ubomi bethu. Umlinganiswa ophambili kweli bali yintombazana esoloko ihamba nelifu lakhe, umhlobo wakhe ocingayo. Ilifu lithatha iindlela ezahlukeneyo ngokusekwe kwiimvakalelo zakho. Xa elusizi, uNube uyakhala kwaye xa onwabile, uNube ufuna ukudlala… uGlòria Falcón waphinda wasivuyisa ngesindululo esitsha esihle nesentsusa apho abonakalisa khona, kwakhona, umgangatho wakhe obalaseleyo njengombonisi kunye nombhali.
Incwadi enamaphepha angama-28 ethambileyo.
Ukususela kwiminyaka emi-4
«Isilo esibuhlungu, isigebenga esonwabileyo. Incwadi malunga neemvakalelo »
Uyolo, ulusizi, unomsindo ... Izilo nazo zinemvakalelo ezininzi! Kule ncwadi yokuzivelelayo, umfundi oselula uya kufumana ingqokelela yeemaski ezinobuchule ezimele iimoods ezahlukeneyo kunye neemvakalelo ezifunyanwa zizilo zonke (kwaye, ewe, nabantwana!).
Inamaphepha ali-16 kwaye enoqweqwe oluqinileyo.
«I-labyrinth yomphefumlo» ngu-Anna Llenas
Umphefumlo wakho unobuso obuninzi, iingcinga kunye neemvakalelo njengoko unokuzifumana ukuzo. Ezinye zazo ziqaqambile kwaye ziqaqambile, kwaye ezinye zimnyama kakhulu. Kukho ezinye ezikunika inkuthazo namandla; kwaye kukho abanye, awazi ukuba njani, bayikhuphe kuwe ..
Le ncwadi ikumema ukuba udibane nawo onke la mazwe kuhambo oluya kuwe, ngeemvakalelo zakho, iingcinga kunye neemvakalelo, ulandela umgaqo we-maze. Indlela entsonkothileyo njengoko inika umdla. Kunzima ukubona kwangaphambili, kodwa apho ukuzonwabisa, ukonwaba kunye nomfanekiso-ngqondweni kuqinisekiswe ngokupheleleyo.
Incwadi enokufundwa kunye nabantwana abaneminyaka emi-4 ngokugqibeleleyo kodwa inokusebenza kude kube kwinqanaba lokugqibela lePrayimari. Kufuneka kuluhlu!
Inamaphepha ali-128 kwaye enoqweqwe oluqinileyo. Ixabiswe kakhulu ngabafundi abasele beyifundile.
Ukususela kwiminyaka emi-5
«Umzi mveliso omkhulu wamagama» ngu-Agnes de Lestrade
Kukho ilizwe apho abantu kunzima nokuthetha. Kwilizwe elingaqhelekanga, kuya kufuneka uthenge kwaye uginye amagama ukuze ubenako ukuwabiza. UJavier udinga amagama ukuvula intliziyo yakhe kwiiNieves ezintle. Kodwa yeyiphi onokuyikhetha? Kuba, ukuze uthethe into ofuna ukuyithetha kuNieves, udinga imali eninzi! Awungekhe uhambe gwenxa ...
Incwadi enamaphepha angama-40 ekhuselekileyo.
"Isiqithi soTatomkhulu" nguBenji Davies
U-Leo uyamthanda utat'omkhulu. Kwaye utat'omkhulu uyamthanda uLeo. Ayisoze itshintshe loo nto. Incwadi entle nefudumezayo ebonisa ukuba abantu esibathandayo bahlala bekufuphi, nokuba bakude kangakanani na. Isuka kumbhali woMnenga. Ophumelele Ibhaso lokuQala leNcwadi lika-Oscar 2014.
Incwadi enamaphepha angama-32 ekhuselekileyo.
Ukususela kwiminyaka emi-6
"Ukudana" nguClaude Boujon
Kudala-dala, kwakukho imingxunya emibini engabamelwane. Kwenye yayihlala uMnu. Bruno, umvundla omdaka; kwelinye, Mnu Grimaldi, umvundla ongwevu. Ekuqaleni kokuhlalisana kwabo, baqondana ngokumangalisayo. Qho kusasa babebulisana ngobubele: "Molo Mnumzana Bruno," watsho umvundla ongwevu. "Molo kuwe, Mnu. Grimaldi," watsho umvundla omdaka. Kodwa ngenye imini, izinto zaqala ukutshintsha ...
"Tristania Imperial" nguJaume Copons
Abanye abathakathi ababi babile umlingo wobugqwetha iTristania Imperial, egcinwe kwindawo yokugcina amagqwirha kunye nepaki yolonwabo eTibidabo. Yintoni injongo? Yolisa ipaki, isixeko kunye nehlabathi liphela! U-Buri Buri kunye nabahlobo bakhe kufuneka bakhethe phakathi kokujika ububi okanye ukulwa ukwenza uvuyo lukhanye kwakhona.
Incwadi enamaphepha angama-48 ethambileyo.
Ukususela kwiminyaka esi-7 neli-8
«Ukupheka kwemvula kunye neswekile» nguEva Manzano Plaza
Le ncwadi yoqobo yincwadi yokupheka yeemvakalelo. Kwelinye icala, yenza inkcazo echanekileyo, egqibeleleyo yeemvakalelo: ukusuka kwimfesane okanye ukuzingca ukubulela okanye usizi. Kwelinye icala, inika iiresiphi ngezithako eziyimfuneko nezicingelwayo kunye nendlela yokupheka ukuze ulawule iimvakalelo, umzekelo, ungalahli ithemba, uyeke ukuba nomsindo, ukuba nothando okanye ukulwa ubuvila.
Incwadi enamaphepha angama-64 ekhuselekileyo.
"Idayari yeemvakalelo" nguAnna Llenas
Ukuchonga indlela umntu aziva ngayo kubonakala kulula kodwa, enyanisweni, akukho lula kangako. Sifundisiwe ukucinga, ukwenza, ukuthatha isigqibo, kodwa ... kwaye siziva? Eli phephancwadi limalunga noku. Ukuba uziva iimvakalelo zakho, uziqonde kwaye uzibonakalise ngendlela edlalayo, esebenzayo, eyonwabisayo kunye noyilo. Ngothotho lweemithambo zobugcisa ungatyhila ubuchule bakho, ujonge iimvakalelo zakho ezingalunganga kwaye ukhuthaze iimvakalelo zakho ezilungileyo, ngaloo ndlela ufezekise ukwanda kwempilo-ntle kunye nolwazi olukhulu ngokwakho. Kodwa ungakhathazeki, awudingi ukwazi ukuba uzoba njani. Ufuna izinto ezintathu kuphela: -Ipensile okanye usiba, umnqweno wokuzama nokuzonwabisa.
Idayari enamaphepha angama-256.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi eziza kusebenza kwiimvakalelo kunye nabantwana